News - လူတို့၏ဘ ၀ တွင်အတုမြက်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
တပ်ဆင်ခြင်း Tools များ
သဘာဝမြက်ခင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအတုမြက်ခင်းပြင်များကိုအားကစားမြက်ခင်းများ၊ အပန်းဖြေဥယျာဉ်မြက်ခင်းများနှင့်ဘက်စုံသုံးမြက်ခင်းပြင်များအဖြစ်ခွဲခြားထားသောပစ္စည်းပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပုံဆွဲခြင်း၊ လိမ်ခြင်း၊ ယခင်ကအတုမြက်ခင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကုန်ပစ္စည်းများသည်အလွန်ခိုင်မာသောနှင့်ထိရောက်မှုမရှိသဖြင့်လူအနည်းငယ်သာ၎င်းတို့ကိုပြင်ပနေရာများတွင်အသုံးပြုရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ကြသည်။ သို့သော်နည်းပညာတိုးတက်မှုသည်ကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒီအတုမြက်မြက်မြက်ပင်ကလူအများစုကတန်ဖိုးထားသည့်တကယ့်မြက်ပင်နှင့်တူသည်။ သဘာဝမြက်ခင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအတုမြက်ခင်းသည်အားသာချက်များနှင့်အားသာချက်များစွာရှိသည်။
၁။ အတုမြက်ခင်းကိုအခြေခံအုတ်မြစ်မျက်နှာပြင်အမျိုးမျိုးတွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ အရည်အသွေးနိမ့်နိမ့်နိမ့်ခြင်း၊ ကွဲအက်ခြင်းကိုကြောက်ခြင်း၊
2. အတုမြက်သည်ရိုးရှင်းပြီးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်နည်းပါသည်။ ၎င်းသည်သန့်ရှင်းသောရေဖြင့်အမှိုက်များကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီးပျောက်ကွယ်သွားခြင်းနှင့်ပုံပျက်ခြင်းလက္ခဏာများမရှိပါ။
၃။ မြက်ပင်အစစ်နှင့်တူပြီးစိမ်းလန်းစိုပြည်သည်။ မျိုးစုံမှာပြည့်စုံပြီးအမှန်တကယ်အသုံးပြုမှုအရမြက်အရှည်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
၄။ အတုမြက်အားကစားကွင်းသည်လှပသောခြုံငုံအပြင်အဆင်၊ အသုံးပြုမှုနှုန်းမြင့်မားပြီး ၁၀ နှစ်ကျော်သက်တမ်းရှိပြီးကြာရှည်ခံမှုနှင့်ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူပြီးနာရီနှင့်အမျှဆက်တိုက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
5. အတုမြက်ပစ္စည်းသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်ပြီးအချောထုတ်ကုန်ကိုဆောက်လုပ်သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးကာလသည်အချိန်ကာလတိုပြီးတိုသည်၊ အရည်အသွေးသည်ကျွမ်းကျင်ရန်လွယ်ကူပြီးကျွမ်းကျင်သောဗဟုသုတများစွာမရှိဘဲလက်ခံမှုသည်ရိုးရှင်းပါသည်။
အတက်အကျရှိသောမြက်ခင်းပြင်သည်မြင့်မားသောအသုံးပြုမှုနှုန်း၊ ထိတ်လန့်မှုစုပ်ယူမှု၊ ဆူညံသံ၊ ဘေးကင်းမှု၊ အဆိပ်အတောက်မရှိမှု၊ elasticity၊ မီးလျှံနှေးခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ စာသင်ကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုရန်အလွန်သင့်လျော်ပြီး၊
marking ကိုတိုက်ရိုက်စုစည်းထားခြင်းကြောင့်မကြာခဏ marking လုပ်ရန်စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှာလည်းလွယ်ကူပြီးနောက်ဆက်တွဲပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်လည်းနီးပါးရှိသည်။
တယ်လီ+86 510 8521 0675
လိပ်စာ:ယူနိုက်တက် ၇၀၁-၇၁၇၊ အမှတ် ၁၀၊ ရှန်လမ်း၊ ရှင်ဝန်ခရိုင်၊
Wuxi City (PC214028), Jiangsu Provice, PR China